यूक्रेनी सुन्दरीको सूचीमा एनी टप वानमा, मन्त्रमुग्ध पार्ने फोटोफिचर ! - Sagarmatha Online News Portal
यूक्रेनी सुन्दरीको सूचीमा एनी टप वानमा, मन्त्रमुग्ध पार्ने फोटोफिचर !
एजेन्सी २० असार २०७६, शुक्रबार
एजेन्सी । यूक्रेन संसारकै सुन्दरी महिलाहरुको घर हो भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समय यूक्रेन घुम्न जाने जो कोहिलाई पनि यस्तै लाग्न सक्छ । यूक्रेनको राजधानी कीवको गल्ली, अग्लो, लुसुस र भव्य महलहरुमा सुन्दरी महिलाहरुले कसलाई पो आकर्षण नगर्लार ?
यूक्रेनका सुन्दरीहरु छनौट गर्नका लागि धेरै गाह्रो छ । भखरै गरिएको एक अध्ययनले १० सुन्दरी यूक्रेनी महिलाहरु छनौट गरेको छ । ती १० सुन्दरी महिलाहरुमा अभिनेत्री, मोडेल, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व र गायिकालाई सामेल गरिएको छ । यत्तिमात्र होइन यूक्रेनमै जन्मिएकामध्येबाट १० सुन्दरीहरुको छनौट गरिएको थियो ।
यी टप १० मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएकी छिन् यूक्रेनी पप गायिका एनी लरेक । उनलाई यूक्रेनको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी महिलाको उपाधि दिइएको छ । एनी एवेरियन लोकप्रिय पप गायिका पनि हुन् ।
उनले यूक्रेनको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र सम्मानित महिलाको शीर्ष स्थान प्राप्त गरेकी हुन् । उनको सबैभन्दा उपलब्धी भनेको बेलग्रेड (सर्विया)मा भएको यूरोभाइज गीत प्रतियोगीतामा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्दै ‘स्याडी लेडी’को उपाधी चुम्नु पनि हो । हेरौं उनको मन्त्रमुग्ध पार्ने यी तस्वीरहरु !